Vivo IQOO: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Vivo IQOO: Ekwentị mbu nke IQOO bụ nke gọọmentị
Izu ole na ole gara aga, Vivo mara ọkwa na na-eke akara ohuru gi, IQOO. Ekwuru na ekwentị mbụ nke akara ọhụrụ a ga-abịa n'oge na-adịghị anya. Agbanyeghị na amabeghị usoro ụlọ ọrụ ọ ga-eso. Ebe ọ bụ na ụfọdụ mgbasa ozi na-ezo aka na egwuregwu ịgba egwu, mgbe ụfọdụ leaks anyị Gosiputa ekwentị ekwentị. N’ikpeazụ eburula ụzọ gosipụta Vivo IQOO.
Nke a Vivo IQOO bụ ekwentị mbụ nke akara ọhụrụ a sitere na ndị nrụpụta China. Anyị na-ahụ ekwentị nke na-abịa na nnukwu batrị, nke doro anya iji nwee ike ịnụ ụtọ ịkụ egwu ogologo oge. Ọ bụ ezie na enwere akụkụ ndị ọzọ iji tụlee banyere ngwaọrụ ahụ.
Anyị na-ahụ ụfọdụ nkọwa anyị na-ahụ n'ọtụtụ ụdị ewepụtara n'izu ndị a. Mana ekwentị mbu sitere na akara ohuru nke China nwere ike inwe ezigbo niche n’ahịa. Na teknụzụ ọ bụ ọkwa dị elu. Ka ọ na-abịarute ugbua nwere Snapdragon 855 dị ka ihe nhazi n'ime.
1 Vivo IQOO nkọwa
Vivo IQOO nkọwa
Otu akụkụ nke ịtụnanya bụ nhọrọ nke aha. N'ihi na ewereghị ya dị ka ihe siri ike na ụdị abụọ a ga - eme ihe n'adabereghị n'ahịa. Mana anyị chọpụtara na Vivo nwere ezigbo hụrụ aha gị na IQOO Live a. Ndị a bụ nkọwa anyị maara nke ọma na ekwentị:
Ihuenyo: 6,41-anụ ọhịa AMOLED na mkpebi HD zuru ezu
Rear igwefoto: 13 + 12 + 2 MP
Igwefoto n'ihu: 12MP
Batrị: 4.000 mAh na FlashCharge
N'oge a anyị enweghị nkọwa niile, mana anyị nwere ike ịchọta ihe doro anya nke ekwentị ọhụrụ nke ika ahụ na-ahapụ anyị. Otu nnukwu panel, nke nwekwara oke mkpebi. Ya mere, ọ zuru oke maka igwu egwuregwu, kamakwa maka ilele foto ma ọ bụ vidiyo. Ọzọkwa, e gosipụtara na a Vivo IQOO rutere na nkwado maka ihe oyiyi HDR. N'ihe banyere imewe, a na-etinye ya na ihuenyo nwere ọkwa n'ụdị mmiri drain na okpokolo agba.
N'ime ya, Snapdragon 855 na-echere anyị dị ka onye nhazi, nke na-enye ya ikike dị mkpa igwu egwu n'oge niile. Anyị nwekwara a usoro nke RAM na nchikota nchikota. Enwere ọbụna ụdị nke nwere 12 GB nke RAM. O doro anya na nzọ doro anya nke akara ahụ na ike na arụmọrụ.
Ndabere nke Vivo IQOO na-eme ka anyị hụ na igwefoto atọ dị n'akụkụ ahụ. Ọ na-eji sensọ 13 + 12 + 2 MP. E kwubeghị ya, ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe mmetụta ọ bụla nwere arụmọrụ ọ bụla. Yabụ na nchikota ha niile ga-enyere anyị ezigbo foto aka n'ụzọ dị mfe. N'ezie, batrị ya bụ ike ọzọ, nke nwere ikike dị ukwuu nke 4.000 mAh, na mgbakwunye na ịnwe ngwa ngwa na ya.
Dị ka ọ na-adịkarị n'ọnọdụ ndị a, mmalite nke ekwentị kwadoro naanị maka ahịa ndị China. Yabụ, anyị enweghị ozi ọ bụla ugbu a gbasara mwepụta nke ngwaọrụ na Europe. Anyị na-atụ anya ịmatakwu n'oge na-adịghị anya, ọ bụ ezie na Vivo abụghị ụdị ama ama ama na Europe, nke nwere ike ịrụ oke ọrụ.
Dị ka e kwuru, anyị na-ahụ dịgasị iche iche nke RAM na nchekwa dị na Vivo IQOO a. E gosipụtawo ọnụahịa nke onye ọ bụla n’ime ha maka ahịa na China. Ọnụahịa ha bụ:
Versiondị nke nwere 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa dị n'ime na-efu yuan 2.998, ihe dị ka euro 393 ịgbanwe
Ihe nlere anya nke nwere 8GB RAM na 128GB nke nchekwa di n’ime ya bu 3.298 yuan (ihe di ka 432 euro ịgbanwe)
Vivo IQOO nwere 8GB RAM na 256GB nke nchekwa dị n'ime ya na-akwụ 3.598 yuan (ihe dị ka euro 471 ịgbanwe)
Versiondị ahụ nwere 12 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa dị n'ime na-abịa na ọnụahịa nke 4.298 yuan (ihe dị ka 562 euro ịgbanwe)
Anyị na-atụ anya ịnweta ozi n'oge na-adịghị anya banyere mwepụta enwere ike na Europe nke ama egwuregwu a sitere na ụdị ndị China. Kedu ihe ị chere gbasara ngwaọrụ ika a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Vivo IQOO: Ekwentị mbu nke IQOO bụ nke gọọmentị
Onye isi oche Huawei kwuru na atụmatụ Galaxy Fold adịghị mma na Mate X ka mma
MIUI ga - agbakwunye ihe eji ekpuchi mkpọchi mkpọchi iji gbochie mkpọchi achọghị